Inkcazo:I-Multimedia ye-Auto Navigation ye-IBIZA,I-Auto Multimedia ye-IBIZA 2013,Ukuhamba ngokuzenzekelayo kwe-IBIZA 2013
Home > Imveliso > Isihlalo se-Dvd seMoto ye-Android > i-auto navigation multimedia ye-IBIZA 2013
I-multimedia ye-Android 8.0 PX5 ye-auto navigation ye-IBIZA ngo-2013
1. Ifanelekile kwi-multimedia ye-auto navigation ye-IBIZA ngo-2013.
Iyahambelana neninzi yemisebenzi yokulawula ivili. Ukucula ngokulula ngengoma, iitshaneli kunye nokulungelelanisa ivolumu ukukunceda unciphise ukuphazamiseka kwaye ugcine amehlo esendleleni.
3. Ukwazi ukuhambisa iSpotify kunye nePandora kwifowuni yakho ngeBluetooth ukonwabela izigidi zeengoma ozithandayo.
I-3) i- multimedia ye-auto navigation ye-IBIZA ixhasa i-GPS Navigation, faka imephu yeGoogle kwangaphambili (ngaphandle kwedatha yemephu engaxutywanga); Inkxaso yokukhupha phantse yonke into iye entlokweni, nokuba iyayidlala ividiyo esuka kwi-USB / ikhadi le-SD, okanye kwikhompyuter ividiyo ityhubhu; Yakhelwe kwi-USB Port / Micro SD Slot (ukuya kuthi ga kwi-128GB), iWIFI (yakhiwe kwimodem yeWIFI) / 4G (isixhobo esongezelelweyo esifunekayo); Inkxaso yokubuyisa ikhamera (isixhobo esongezelelweyo).
I-4) Inkxaso yokuqalisa ngokukhawuleza, emva kofakelo, le multimedia yokuhamba ngemoto ye-IBIZA ifuna kuphela imizuzwana eli-1 ukugqiba ukuqala kwi-2nd ixesha. (Abanye oomatshini bakhangela imizuzwana engama-30).
I-5) i- multimedia yokuhamba ngemoto ye-IBIZA xhasa umnxeba weBluetooth / ukudlala odiyo, Vumelanisa incwadi yefowuni, abo bakhangela ngokukhawuleza, umbhobho wangaphandle; Ukuxhasa ukuvavanywa kokuvavanywa kweBluetooth OBD2
I-Multimedia ye-Auto Navigation ye-IBIZA I-Auto Multimedia ye-IBIZA 2013 Ukuhamba ngokuzenzekelayo kwe-IBIZA 2013 I-Multimedia ye-Auto Navigation ye-PG308 I-Multimedia ye-Auto Auto I-Multimedia Car DVD ye-GPS Navigation I-Multimedia ye-Auto Auto yeChery E3 I-Capativa 2012-2016 I-Multimedia ye-Auto Navigation